Rakaab joojiyay tareen uu darawalkiisii miyir beelay - BBC News Somali
Rakaab joojiyay tareen uu darawalkiisii miyir beelay
Labo nin ayey u suurtagashay inay joojiyaan tareenka oo xawaare dheer ku socday
Rakaab ku guuleystay inay joojiyaan tareen xawaare dheer ku socday ayaa dalka Jarmalka looga aqoonsaday inay halyeeyo yihiin, ka dib markii ay tallaabadaas qaadeen xilli uu darawalkii miyir beelay halis badanna ay kusoo wajahneyd.
Cabsi ayaa ku dhex faaftay dadkii tareenkaas saarnaa maalintii Axadda, wuxuuna kusii jeeday magaalada dhinaca galbeed ku taalla ee Bonn.
Labo nin ayaa jabiyay muraayaddii shirka uu ku jiray darawalka, ka dib markii la arkay isagoo miyir beelay xilli uu tareenka aad u ordayay.
Haweeney ayaa wacday shirkadda gaadiidka si loo helo macluumaad ku saabsan sida loo joojiyo tareenka. Qalabka degdegga ah ee laga joojiyo tareenka ayaa shaqeyn waayay. Laakiin ugu dambeyn rakaabkii ayaa ku guuleystay inay si nabad ah u istaajiyaan.
Markii hore jabinta muraayadda shirka ayaa argagax galisay rakaab badan, kuwaasoo wacay booliska.
Tareen laayay ciyaal iskuul
Tareennada yar yar ee noocan ah ayaa aad looga isticmaalaa dalalka qaaradda Yurub
Dhacdadan ayaa kusoo aadday xilli saqdhexe oo habeennimo ka dib ah, xilliga waddankaas.
"Tallaabadii ugu habbooneyd ayey qaadeen wixii ugu fiicnaa ayeyna sameeyeen xilli lagu jiray xaalad aad u khatar badan, waxayna badbaadiyeen dad badan", ayuu yiri duqa magaalada Bonn oo lagu magacaabo Ashok Sridharan, mar uu la hadlayay wargeyska General Anzeiger.
Shirkadda maamusha gaadiidka maxalliga ah ee SWB ayaa isdifaacday, ka dib markii ay dacwad oogeyaasha billaabeen baaritaanno ku aaddan dhacdadaas
Waxay shirkaddu sheegtay in qalabka deg degga ah ee laga joojiyo tareenka uusan si kadis ah ku istaajineynin balse uu ugu horreyn darawalka digniin siinayo si uu ula hadlo rakaabka, markaas ka dibna tareenka la joojinayo.
Qalabka digniinta siinaya darawalka ayaan shaqeyneynin haddii uusan wadaha tareenka miyir lahayn.
Darawalka ayaa loo qaaday isbitaalka, halka raggii tareenka istaajiyayna ay soo gaareen dhaawacyo fudud.